१ Business व्यवसायिक कारण ट्विटर Martech Zone
शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० शनिबार, अक्टोबर 25, 2014 Douglas Karr
व्यवसायले ट्विटर प्रयोग गर्नका लागि संघर्ष गर्न जारी राख्छ। यसको प्रतिलिपि लिनुहोस् ट्विटरभिले: कसरी नयाँ ग्लोबल छिमेकमा कारोबार सफल हुन सक्छ by शेल इजरायल। यो एक शानदार किताब हो जुन ट्विटरको जन्म र बृद्धिलाई कागजातहरूको रूपमा व्यवसायका लागि अविश्वसनीय नयाँ माध्यमको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ।
जब म किताब पढ्दै थिएँ, शेलले धेरै कारणहरू उल्लेख गर्‍यो किन एउटा कम्पनीले ट्विटर प्रयोग गर्न चाहान्छ। मलाई लाग्छ कि ती मध्ये धेरै लिस्टिंग लायक छन्… केही चर्चाको साथ… साथै केहि अरु।
कुपन र अफरहरू वितरण गर्दै - किनकि ट्विटर एक अनुमति-आधारित संचार माध्यम हो, यो प्रस्तावहरूको वितरणको उत्तम माध्यम हो। राम्रो साथी एडम सानो यो रेष्टुरेन्टमा र हेरेको छ घर जग्गा उद्योग - जहाँ मोबाइल अलर्ट, ट्विटर, फेसबुक, ब्लगिंग र सिंडिकेशन को संयोजनले उसको सबै ग्राहकहरूको व्यवसाय बढाउन मद्दत पुर्‍याएको छ ... जबकि डाउन मार्केटमा!
कर्मचारीहरूसँग सञ्चार गर्दै - ईमेल सर्भरहरू बाँध्नु भन्दा वा बैठक कोठामा व्यक्तिहरूको समय बर्बाद गर्नु भन्दा ट्विटर एक उत्तम सहयोगी उपकरण हो। वास्तवमा, त्यहि कारण यो थियो Oto द्वारा बनाइएको पहिलो Twttr नाम अन्तर्गत (i रeएसएमएस को लागी कम टाइप को लागी छोडियो!)
ग्राहक उजूरी प्राप्त गर्दै - कम्पनीहरूले निरन्तर तिनीहरूको फोहोर लुगा धुने सार्वजनिक आँखामा नपर्न संघर्ष गर्दछन्। विडम्बना भनेको त्यो उपभोक्ता हो अब 5-स्टार सेवामा विश्वास नगर्नुहोस्। कम्पनीहरूको सबैभन्दा आक्रामक पदोन्नति र आलोचना सामान्यतया आउँदछ पछि तिनीहरूको प्रतिक्रिया ... वा निष्क्रियता। खुल्ला मा ग्राहक गुनासो स्वीकार गरेर, अन्य उपभोक्ताहरूले तपाईं कस्तो कम्पनीको हेर्न सक्नुहुन्छ साँच्चै हो।
कार्य खोज्दै वा पोष्ट गर्दै - भर्तीकर्ता र खोजी गर्नेहरूले ट्विटरको प्रयोग गरी रोजगार चाहेको वा रोजगारीका बारेमा पोस्ट गर्नका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। भौगोलिक खोजीको साथ तपाईले रोजगार खोज्न लाग्नु भएको नजिकको खोजी गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको खोजीको लागि अन्य सर्तहरू मिलाउन सक्नुहुनेछ।
जानकारी खोजी र साझेदारी गर्दै - पछाडि जब म एक हजार आगन्तुक मुनि थिए, ट्विटर एक बन्यो खोज इन्जिनको लागि उत्तम विकल्प। गुगलले पनि यो महसुस गरिसकेको छ, तपाइँको अनलाइन समुदायहरूलाई खोजी परिणामहरूमा एकीकृत गर्दै। सामान्यतया, मैले पाएको उत्तरहरू धेरै प्रासंगिक छन् किनभने मलाई पछ्याउनेहरू उही उही उद्योगमा काम गर्दैछन् जस्तो म हुँ।
इनबाउन्ड मार्केटिंग रणनीति - कम्पेन्डियममा काम गर्दा, हामीले टिबेरबाट हाम्रो साइटमा आएको इनबाउन्ड लीडहरूको संख्या र गुण देख्न थाल्यौं सर्चको माध्यमबाट रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बढी। यद्यपि खोज इन्जिनले हामीलाई आगन्तुकहरूको विशाल मात्रा दिए, हामी बिल्कुल ग्राहकहरूलाई जहाजमा ट्विटर प्राप्त गर्न र उपकरणहरू मार्फत तिनीहरूका फिडहरू स्वचालित गर्न सल्लाह दिन थाल्यौं। Hootsuite or Twitterfeed.
मानवीय व्यवसाय - जनतासँग थोरै वा कुनै सम्पर्क नभएको व्यवसायले पत्ता लगाइरहेको छ कि मानव स्पर्श प्रदान गर्नु व्यवसायको लागि उत्तम हो र ग्राहक प्रतिधारणको लागि आवश्यक छ। यदि तपाईंको व्यवसाय मानवीय अन्तर्क्रिया प्रदान गर्न संघर्ष गर्दै छ र स्रोत-भोकमरी छ भने, ट्विटर एक उत्तम माध्यम हो। यो दिनभरि निगरानी गर्न आवश्यक छैन (यद्यपि म यसलाई सल्लाह दिदैछु ... द्रुत जवाफहरू ओहस र आहाहरू पाउँछन्), तर अवतारको साथ वास्तविक व्यक्ति द्वारा अनुहारहित कम्पनीबाट आएको प्रतिक्रिया सधैं राम्रो हुन्छ।
व्यक्तिगत ब्रान्डि। - मानवीय व्यवसायको साथमा कर्मचारीहरू वा व्यवसाय मालिकहरूको लागि एक व्यक्तिगत ब्रान्ड निर्माण गर्ने क्षमता हो। एक व्यक्तिगत ब्रान्ड अनलाइन बनाउँदा धेरै चीजहरू हुन सक्छ ... सायद पनि तपाईंको आफ्नै एजेन्सी सुरू गर्दै! आफ्नो क्यारियर को बारे मा स्वार्थी हुनुहोस्। धेरै व्यक्तिहरू चिन्तित थिए कि उनीहरूको कम्पनीले के सोच्न सक्दछ यदि तिनीहरूले आफूलाई सार्वजनिक आँखामा बाहिर निकाल्छन् भने अब तिनीहरू जागिर खोजिरहेका छन् किनकि उही कम्पनीले उनीहरूलाई काममा लगाएको थियो।
ट्विटर खोज अनुकूलन ह्याशटैगको साथ - ट्विटर मा खोज अधिक र अधिक सामान्य भइरहेको छ। तपाईंको ट्वीटमा वा तपाईंको अटोपोस्ट मन्त्रिन्त्रमा प्रभावकारी रूपमा ह्यासट्याग प्रयोग गरेर फेला पार्नुहोस्।
प्रभावी नेटवर्किंग - अनलाइन नेटवर्किंग अफलाइन नेटवर्किंग को लागी एक महान अग्रदूत हो। म तपाईंलाई ट्विटर मार्फत भेट्ने कति सम्भावनाहरू बताउन सक्दिन। हामी मध्ये कोही एक अर्कोलाई महिनौं सम्म जान्दछौं वास्तवमा अफलाईन जोड्नु भन्दा पहिले, तर यसले केही राम्रो व्यापार सम्बन्धमा पुर्‍यायो।
भाइरल मार्केटिंग - ट्विटर भाइरल मार्केटिंगमा अन्तिम हो। रिट्वीट (RT) एक अविश्वसनीय शक्तिशाली उपकरण हो ... तपाईंको सन्देश नेटवर्कबाट नेटवर्कमा नेटवर्कमा मिनेटको केही मिनेटमा धकेल्दै। मलाई थाहा छैन कि मार्केटमा अहिले नै छिटो भाइरल टेक्नोलोजी छ।
कोष जुटाउने - शेलले केहि महान उदाहरणहरू लेख्छन् कसरी कम्पनीहरूले परोपकारी कार्यको लागि ट्विटरको प्रभावकारी प्रयोग गरेका छन्। फाइदा ब्यापार र परोपकारी दुबैलाई छ - किनकि व्यवसायको संलग्नता ट्विटरमा राम्रो प्रचार गरिएको छ किनकि उनीहरूले कतै कतै वेब साइटमा उल्लेख गरेको मात्र छ।
अनलाइन अर्डरिंग - कूपन र प्रस्ताव बाहेक, केही व्यक्तिहरूले पनि ग्राहक आदेश अनलाइन लिइरहेका छन्। शेलले कफि शपको बारेमा लेख्दछ जहाँ तपाईं आफ्नो अर्डरमा ट्वीट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। धेरै सुन्दर!
सार्वजनिक सम्बन्ध - ट्विटरले १ 140० अक्षर टाइप गर्ने गतिमा काम गर्ने भएकोले, तपाईंको कम्पनी सबैको अगाडि बढ्न सक्छ ... प्रतिस्पर्धा, मिडिया, लीक ... ट्विटर समावेशी आक्रामक PR रणनीति राखेर। जब तपाईं पहिले घोषणा गर्नुहुन्छ, मानिसहरू तपाईं समक्ष आउँदछन्। चीजहरू सही हुनको लागि यसलाई परम्परागत मिडिया वा ब्लगरमा नछोड्नुहोस् ... कम्युन र संचार निर्देशित गर्नका लागि ट्विटर प्रयोग गर्नुहोस्।
संचार चेतावनी - तपाईंको कम्पनीमा समस्या छ र तपाईंको ग्राहकहरू वा सम्भावनाहरूसँग संवाद गर्न आवश्यक छ? ट्विटर यो गर्नको लागि एक उत्तम तरिका हुन सक्छ। पिंग्डमले यसको सेवाहरूमा ट्विटर अलर्टहरू थपेको छ ... कस्तो राम्रो विचार! बाहेक ... जब ट्विटर तल जान्छ तिनीहरूले सेवा प्रयोग गर्न सक्दैन 😉 एउटा चेतावनी पनि राम्रो चीज हुन सक्छ ... सायद तपाईंको ग्राहकहरूलाई सूचित गर्न कि उत्पादन फेरि स्टकमा छ।
शेलले उल्लेख गर्दछ कि उसको पुस्तकहरूमा केहि व्यवसायिक प्रयोग भएका केसहरू प्रत्यक्ष रूपमा राजस्वमा श्रेय दिन मिल्दैन। यद्यपि यो सत्य हो, तिनीहरू अन्ततः नाप्न सकिन्छ र लगानीमा फिर्ताको लागू हुन्छ। म विश्वस्त छु कि ग्राहक सेवा विभागले कल भोल्युम ट्र्याक गर्दैछ र ट्वीटरले मापनको केही प्रकारको लागि यो देख्न सक्दछ कि यदि ट्विटरले उत्तरहरू प्रचारित भएपछि औसत कल भोल्युम घटाउँछ भने। # १ with को रूपमा ... यदि मेरो साइट तल जान्छ र यो ट्वीट गरिएको छ भने ... तब ती व्यक्तिहरू मलाई फोन गर्न कम उपयुक्त हुनेछन् किनकि उनीहरूले मैले पहिले नै यो मुद्दाको पुष्टि गरिसकेको छु भनेर मलाई थाहा दिन बोलाउनुहोस्।
म के छुरहेको छु
टैग: कुपनग्राहक उजूरीछुटहरूकर्मचारी संचारजागिर खोजइनबाउन्ड मार्केटिङजानकारी खोजीप्रस्तावबाढ्नुशेल इजरायलtwitterट्वीटरविले
वाह, यो एक महान सूची डगलस हो। "म के हराइरहेको छु?" यस पोष्टलाई अन्त्य गर्ने सही तरिका जस्तो देखिन्छ किनकि मैले सोच्न सक्ने सबै चीजहरू पहिले नै त्यहाँ समावेश गरिएको छ। म तिमीलाई के छुटेको छु भन्ने छु >> यो पुस्तक मेरो शेल्फमा छ। तेस्रो पोष्ट आज यो उल्लेख गरिएको छ त्यसैले म निश्चित रूपमा यो सप्ताहन्तमा खरीद गर्दैछु। जानकारी को लागी धन्यवाद। -पल
तपाईं शर्त लगाउनुहुन्छ, पॉल! यो एक उत्कृष्ट पुस्तक हो - तपाईंले यसलाई सूचीमा राख्नु भएकोमा खुशी छ।
ओस्कर डेल सान्तो
कस्तो भयानक पोस्ट डगलस! हाम्रा ग्राहकहरूलाई ट्विटर र सोशल मिडिया मार्केटिङ बजार गर्न हामीलाई थप गोला बारुद दिनु भएकोमा धन्यवाद।
धन्यवाद ओस्कर! चाखलाग्दो छ कि हामीलाई अझै गोला बारुद चाहिन्छ, हैन?
जनवरी 28, 2010 मा 10: 25 एएम
व्यापार संचार इ-मेल बाट। FYI।
यी उत्कृष्ट बिन्दुहरू हुन्, र तिनीहरू निश्चित रूपमा हाम्रो उद्योगमा सत्य साबित भएका छन्। किनकी हामी एक अनलाइन सर्वेक्षण कम्पनी हौं, मानिसहरू मसँग ट्विटर र Facebook मार्फत आफ्ना समस्याहरू लिएर आउँछन् जसरी उनीहरूले ग्राहक समर्थनलाई फोन गर्छन्। र तपाईलाई के थाहा छ, किनकि म सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनीहरूसँग जोडिएको महसुस गर्छु, म निश्चित गर्दैछु कि मैले उनीहरूको गुनासोको हेरचाह गरेको छु। हामीले यसबाट धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं, र मेरो अनुभवमा, यसले समुदायको वास्तविक भावना सिर्जना गर्दछ। आजकल ट्विटरमा नभएको कुनै पनि व्यवसाय ठूलो तरिकामा हराइरहेको छ!